किन ‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिरिए माग्ने बुढा ? यस्तो छ कारण ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»चलचित्र»किन ‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिरिए माग्ने बुढा ? यस्तो छ कारण !
किन ‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिरिए माग्ने बुढा ? यस्तो छ कारण !
By रिता घिसिंग on १३ माघ २०७४, शनिबार ०६:३४ चलचित्र
काठमाडौँ : सुदर्शन थापाको निर्देशन तथा अभिनेत्री पूजा शर्माको निर्माणमा बन्न लागेको अनटाइटल प्रोजेक्टमा अनुबन्धित भएपछि चर्चित हाँस्य कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बूढा’ पहिलो पटक ‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिरिएका छन। ‘ छ एकान छ’ फिल्मबाट ठूलोपर्दामा पाइला राखेका माग्ने बुढाले त्यसयता ‘छक्का पञ्जा २’सम्म आइपुग्दा चार वटा उत्कृस्ट फिल्म खेलिसकेका छन् ।
‘छक्का पञ्जा’ टिमबाट बाहिरिएसंगै उनलार्इ अब बाहिरी ब्यानरमा पनि दर्शकले देख्न पाउने भएका छन । यतिबेला माग्ने बुढाले १० लाख पारिश्रमिक लिएर सुदर्शन पूजाको फिल्ममा अनुबन्ध भएको समाचार भाईरल बनिरहेको छ । उनले नै १० लाख लिएको स्विकार गरिसकेका छन् ।
फिल्मको कथावस्तु मन परेकोले अभिनयको लागी तयार भएको उनले बताएका छन् । उता ‘छक्का पञ्जा’ टिमले बर्षमा एउटा बाहिरी ब्यानरको फिल्म खेल्न फुकुवा गरेकै कारण यो प्रोजेक्टको लागी तयार भएको समेत खुलाएका छन् । फिल्मको छायाँकन माघको तेश्रो साताबाट सुरु हुने बताईएको छ ।
६ आश्विन २०७५, शनिबार ०९:२८ 0
चलचित्र ‘छक्कापञ्जा–३’ घटस्थापनाबाट प्रदर्शनमा आउने
२५ भाद्र २०७५, सोमबार ०७:५१ 0
चलचित्र ‘छक्का पञ्जा ३’ को अर्को गीत ‘पछि उमेर ढल्किन्छ’ सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
२० भाद्र २०७५, बुधबार ११:१२ 0
हेर्नुस् चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’ (भिडियोसहित)
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०३:२९ 0
जिब्रो, ओठ र मुखमा खटिरा आयो ? यसो गर्नुहोस अब एकछिनमै गायब हुन्छ [भिडियो सहित ]